मनोरन्जन – Page2– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१६ मंसिर २०७७, मंगलवार ०५:३० English
अस्मिता–विशालको ‘यो धड्कन’ २९ कार्तिक २०७७, शनिबार ११:३१
विवादपछि १५ केजी तौल घटाएर फिल्ममा तनुश्री २८ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ११:०७
मुम्बई । भारतीय अभिनेत्री तनुश्री पछिल्लो एक वर्षबाट चर्चासँगै विवादमा रहिन् । अभिनेता नाना पाटेकरमाथि शारीरिक शोषणको आरोप लगाएपछि उनी विवादमा आएकी थिइन् । यो विवादमा उनकै एक वर्षभन्दा लामो समय बित्यो । यतिबेला भने यी अभिनेत्री नयाँ फिल्मको तयारीमा छिन् । दक्षिण भारतीय फिल्मबाट..
तालसको सकियो छायांकन २७ कार्तिक २०७७, बिहीबार १०:२५
काठमाडौं । गत असोजबाट केही चलचित्रको छायांकन सुरु भएको छ । यसैक्रममा नेपाली चलचित्र ‘तलास’को यतिबेला छायांकन सकिएको छ । यो चलचित्रको छायांकन सम्पन्न भएपछि धमाधम पोस्ट प्रोडक्सनको काम थालिएको छ । यो चलचित्रमा एलिना बासकोटा, राजकुमार लिंदेन, सोम लामा, दिलिप ठकुरी, विमला खजुम, अजय..
रीता र सन्तोषको डिस्या र डी लख २६ कार्तिक २०७७, बुधबार ०९:५८
काठमाडौं । कलाकार रीता राना मगर र सन्तोष राना मगरले मगर भाषाको गीत ‘डिस्या र डी लख...’ बजारमा ल्याएका छन् । उनीहरूको यो गीत युट्युबबाट सार्वजनिक गरिएको छ । यो गीतमा डोलराज बाह्रघरे मगरको शब्द तथा संगीत रहेको छ । गीतको भिडियोमा मगर फिल्मका लोकप्रिय नायक रमेशबाबु थापा मगरसँगै रविता..
विश्व र अस्मिताको आकाशैको २५ कार्तिक २०७७, मंगलवार १०:३७
काठमाडौं । गायक विश्व नेपाली र अस्मिता परियारले आकाशैको... बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । यसमा आनन्द राईको संगीत रहेको गीतमा डा. राजुबाबु श्रेष्ठको शब्द र गोपाल रसाइलीको संगीत संयोजन रहेको छ । भिडियो ट्री इन्टरटेन्मेन्टको युट्युब च्यानलमार्फत रिलिज गरिएको छ । गायिका..
‘आउ माया साथैमा’मा सरोज र आश्माको नृत्य २४ कार्तिक २०७७, सोमबार १०:५२
काठमाडौं । प्रताप दास र अस्मिता अधिकारीको स्वर रहेको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक ‘आउ माया साथैमा’ बोलको गीतमा गंगा दुलालको शब्द तथा राजेन्द्र बजगाईंको संगीत रहेको छ । डान्सिङ शैलीमा तयार भएको यस गीतको भिडियोमा काट्रुन क्रुजका सरोज अधिकारी र आश्मा विश्वकर्माको अभिनय..
राजेशपायल र निलमको गीतमा सन्तोष र सलिनाको रोमान्स २३ कार्तिक २०७७, आईतवार ०९:३६
काठमाडौं । लोकप्रिय गायक राजेशपायल र निलम रोजु राईको स्वर रहेको ‘पूर्वै शहर’ नामक म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । संगीतकार तथा गायिका निलमको संगीतमा रहेको गीतका शब्द शृजना आलोक चाम्लिङ राईका रहेका छन् । प्रवासमा बसेर आफ्नो जन्मभूमिलाई धेरै सम्झिने र घर गाउँ गइहालौं भन्ने इच्छा..
धनगढीका युवकसँग नायिका स्वेता खड्काको बिहे मंसिर ५ गते २२ कार्तिक २०७७, शनिबार १६:०४
काठमाडौं । अभिनेत्री स्वेता खड्काले बिहे गर्न लागेको खबरले यतिबेला फिल्मी जगतमा चर्चा बढेको छ । दशैंको टीका लगाएका बेला एक युवकसँगको तस्वीर सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिएपछि स्वेताको बिहेबारे चर्चा बढेको हो । दशैंका बेला सार्वजनिक भएका तस्वीर धनगढीका विजयेन्द्र रावतको हो । उनका..
यी हुन् बलिउडमा न्युड फोटो खिचाउने कलाकार २२ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:५६
मुम्बई । बलिउड कलाकार मिलिन्द सोमनले हालै न्युड फोटो सुट गरे । उनले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा उक्त तस्विर खिचाएका थिए । समुन्द्रको किनारमा नाङ्गै दौडिएर उनले पोज दिएका थिए । उनले सोही तस्विर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्दै लेखे ‘ह्याप्पी बर्थ डे टु मी’ सोही तस्विरका कारण उनी सामाजिक..
कोरोना संक्रमित मनोज गजुरेललाई आईसीयुमा राखेर उपचार गरिँदै २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १२:२३
काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालको आईसीयुमा राखिएको छ । घरमै आइसोलेसनमा बसेको समस्यामा स्वास्थ्य गम्भीर भएपछि..
सुमन कार्कीको अभिनयमा ‘सागर बिचमा’ २० कार्तिक २०७७, बिहीबार ११:३१
काठमाडौं । कलाकार सुमन कार्की फिचर्ड 'सागर बिचमा’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। यस गीतमा स्वर गायिका सोनाम गुरुङको रहेको छ भने गीतलाई वरिस्ठ संगीतकार सुशील बिश्वकर्माले संगीतवद्द गरेका हुन्। गीतमा कुमार भण्डारीको शब्द रहेको छ। फणिन्द्र राईले यस गीतलाई संगीत..
श्रद्धा अनुबन्धित १९ कार्तिक २०७७, बुधबार ११:५५
फिल्म ‘कृष्ण लिला’मा अभिनेत्रीको रुपमा श्रद्धा क्षेत्री अनुबन्धित भएकी छन् । यो भुमिकामा यस अगाडि अभिनेत्री दीपिका प्रसाई अनुबन्धित भएकी थिइन् । तर, स्वास्थ्यका कारण अभिनेत्री दीपिकाले अभिनय गर्न नसक्ने बताएको कारण उक्त भुमिकामा निर्माण युनिटले अहिले श्रद्धालाई अनुबन्धित..
निराजन कडेलको ‘उड्यो रे मेरो मन’ सार्वजनिक १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार ११:३७
काठमाडौं । गायक निराजन कडेल र गायिका प्रविशा अधिकारीको युगल स्वरमा रहेको गीत ‘उड्यो रे मेरो मन' बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। प्रेमिल शैलीको यस गीतमा शब्द र संगीत प्रमोद कोइरालाको रहेको छ। यस गीतलाई शैलेन्द्र एम प्रधान ( वावु ) ले संगीत संयोजन गरेका हुन्। कालिनचोकमा..
गायक कमल खत्रीको ‘याद’ सार्वजनिक १७ कार्तिक २०७७, सोमबार ११:१७
काठमाडौं । गायक कमल खत्रीको स्वरमा रहेको ‘याद’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। सेण्टिमेण्टल भर्सनको यस गीतमा शब्द युवा गीतकार सुदीप लम्सालको रहेको छ भने संगीत स्वयम् गायक कमल खत्रीको रहेको छ। यस गीतलाई रिकेश गुरुङ किजले संगीत संयोजन गरेका हुन्। म्युजिक भिडियोमा..
‘जमाना मभिं स्व’ सार्वजनिक १६ कार्तिक २०७७, आईतवार १०:३६
काठमाडौं । मनमा माया भएनि जमानाको नजरमा पर्ला भन्ने चिन्ता भएकी युवतीलाई जमाना हाम्रै हो भनेर बुझाउन सफल युवकको कथा बोकेको नेपाल भाषाको म्यूजिक भिडियो ‘जमाना मभिं स्व’ सार्वजनिक भएको छ । एक समारोहकाबीच वरिष्ठ सिने पत्रकार विजयरत्न तुलाधरले उक्त म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका..
ओक्कल दोक्कल युट्युब ट्रेण्डिङमा १५ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:२९
काठमाडौं । चर्चित गायिका सहिमा श्रेष्ठ र गायक सन्दिप न्यौपानेको डान्सिङ बिटमा रहेको नयाँ गित “ओक्कल दोक्कल” को म्युजिक भिडियो युट्युब न. १ ट्रेण्डिङमा परेको छ। भिडियो सार्बजनिक भएको छोटो समयमा लाखौ दर्शक श्रोताहरुको माया बटुल्न सफल भएकोमा गायिका सहिमा श्रेष्ठ अहिले दङ्ग..